Fampianarana ambony :: Mbola malalaka ny tontolon’ ny asa amin’ny sehatra sosialy • AoRaha
Fampianarana ambony Mbola malalaka ny tontolon’ ny asa amin’ny sehatra sosialy
Mivelatra amin’ny lafiny maro. Anisan’ny mbola vitsy ireo olona mirotsaka amin’ny asa sosialy eto amintsika, raha ny fanazavan’ny talen’ny sekoly ambony tsy miankina iray, etsy Behoririka. Nambarany fa malalaka ny tsenan’asa amin’izany noho io fahavitsian’ny olona misehatra aminy io.
Maro be ny asa azo atao amin’ny asa sosialy, saingy nisafidy ny hikarakara ireo olona manana fahasahiranana manokana kosa ity renim-pianakaviana iray avy any Antsirabe, izay vao nahavita fiofanana mahakasika ny fanabeazana ara-tsosialy ity. Mpampianatra tany amin’ny Sekoly ambaratonga voalohany, tany amin’ny EPP Tongarivo, ny tenany teo aloha ary efa mampianatra eny amin’ny CEG Ivohitra, no izao niverina nanovo fahalalana hafa izao.
“ Isaky ny miambina ireo ankizy manao fanadinana CEPE aho dia mahita hatrany olona gadra manao izany fanadinana izany ary misy rojo vy hatrany. Nahaliana ahy ny mba hahafantatra ny fiainan’izy ireny ka nahatonga ahy handranto fahalalana ho lasa mpanabe manokana teto amin’ny sekoly nianarako. Ny eny amin’ny sehatry ny fonja no tena tiako hiasana saingy misy ihany koa ny sehatra hafa azo trandrahina”, hoy Rasoamalala Voahangy Marie Pauline, nandritra ny famoahana ny andiany voalohany tamin’ireo mpianatra navoakan’ny sekoly ambony momba ny fampandrosoana ara-toekarena ary sosialy, teny Ambohimangakely, ny sabotsy lasa teo.
Ho amin’ity sekoly ity , saika mifantoka kokoa amin’ ny sehatra ara-tsosialy ireo mpianatra satria manodidina ny 80%-n’izy ireo dia liana amin’izany avokoa. “Hanofana ny mpianatra hiatrika ny fampandrosoana ka hiasa ho an’ny tenany manokana no tena tanjonay”, hoy i Hanitriniaina Elea Chilo, talen’ny sekoly.
Famatsiana herinaratra Miditra amin’ny angovo azo havaozina ny Oniversiten’Antananarivo
Fampianarana ambony :: Mbola malalaka ny tontolon’ ny asa amin’ny sehatra sosialy - ewa.mg dit :
16/04/2019 à 00:09
[…] Fampianarana ambony :: Mbola malalaka ny tontolon’ ny asa amin’ny sehatra sosialy est apparu en premier sur […]
Fahasalamana :: Mitaky ny hisian’ny politika nasionaly ireo mpitsabo amin’ny zava-maniry
Lanonam-panokafana Nahavariana ny maso ireo kilalaon-jiro maroloko maorisiana
Baolina kitra – CAN 2021 Tafara-bondrona amin’i Côte d’Ivoire ny Barea